UMGANGATHO WEKHONKRITHI OPHOLILEYO (ISIKHOKELO SOYILO LOKUGCINA) - UKULUNGISWA NGAPHAKATHI
Eyona ukulungiswa Ngaphakathi Umgangatho wekhonkrithi opholileyo (Isikhokelo soYilo lokuGcina)
Wamkelekile kwisikhokelo sethu kumgangatho wekhonkrithi okhazimlisiweyo kubandakanya ukuba ziyintoni na, indleko kunye neendidi ezahlukeneyo ezinjengamabala, usile & itywina kunye nomgangatho wekhonkrithi okhazimliswe ngomatshini. Namhlanje lixesha elonwabisayo lokwakha iiprojekthi, nokuba uyakha okanye uhlaziya ikhaya elitsha okanye indawo yeshishini, izinto ezibonakalayo zenza ukuba kufezekiswe ukubonakala okuhambelana nexabiso elifanelekileyo.
Esinye sezinto zokwakha ezixhamlayo kule nkqubela yanamhlanje yimigangatho ekhonkrithiweyo.
Ngomgangatho wekhonkrithi omenyezelisiweyo umntu unokufumana ukubukeka kweklasikhi yeklasikhi, enze uyilo olukhethekileyo lokusika itrowel okanye alingise inkangeleko yemarble, ukubiza nje iindlela ezimbalwa zoyilo kubanini bamakhaya.
Yintoni imigangatho ekhonkrithiweyo?
Izibonelelo zeKhonkrithi ekhazimlisiweyo
Iindidi zekhonkrithi ephothiweyo
Ukugaya nokutywina ikhonkrithi
Iindidi zokuGaya kunye nokuTywina ukuBonakaliswa kweKhonkrithi
Iindidi ezaziwayo zokugqitywa kweKhonkrithi yoyilo lwangaphakathi
Umgangatho weKhonkrithi oGciniweyo
Iindidi zeMveliso eziQinisekileyo zeKhonkrithi
Umgangatho oPhathekayo oMhlophe
Umgangatho weKhonkrithi omnyama oMnyama
Umgangatho wekhonkrithi ombala mininzi
Umgangatho weKhonkrithi opholileyo
Iindleko zoMgangatho weKhonkrithi opholileyo
Iindleko kumgangatho wekhonkrithi okhoyo ePoland
Ukusila kunye nePoland Ixabiso leKhonkrithi loMgangatho
Iindleko zoMgangatho weKhonkrithi oPolisiweyo vs iithayile
Apho usebenzisa uMgangatho oPhathekayo weKhonkrithi kuyilo lwangaphakathi
Umgangatho wegumbi lokuhlala eliphathekayo
Ikhitshi eliphekiweyo leKhitshi
Umgangatho opholileyo wegumbi lokuhlambela
Umgangatho wegaraji eliphathekayo
Umgangatho ophathekayo weKhonkrithi ophantsi
Ucoceka njani kumgangatho ophathekayo wekhonkrithi
Eyona Arhente yokuCoca ikhonkrithi ilungileyo
Umgangatho wekhonkrithi okhazimlisiweyo luhlobo lokugqiba oluthe lwenziwa amanyathelo amaninzi kusetyenziswa izixhobo zokucoca ezisetyenzisiweyo kwityala lekhonkrithi esele ikho okanye esandula ukuphiliswa ukufezekisa umphezulu ogudileyo kunye nonobukhazikhazi obuphezulu.
Ngokusisiseko, imigangatho ekhonkrithiweyo ekhazimlisiweyo ifana nokuhlaba isanti phantsi kweenkuni, apho imigangatho iphantsi ngomatshini, qinisiwe, kwaye ipolishiwe kusetyenziswa iirrasives ukufikelela kwisiphelo esifana nesipili.
Kukho iindlela ezahlukeneyo zokuyila ikhonkrithi yakho ekhazimlisiweyo enamaqondo ahlukeneyo okuqaqamba. Unokukhetha kwakhona ukuba unombala, ulungelelwaniso, kunye nokukrola okanye ukusika iipateni ngaphezulu.
Imigangatho ekhonkrithiweyo ebengezelelweyo ibikukugqitywa kokuthandwayo kokusetyenziselwa urhwebo kunye nemizi-mveliso ngenxa yokuqina kwayo, ulondolozo olusezantsi kunye nokufikeleleka.
Lukhetho olunokubiza iindleko kwiindawo zorhwebo nezamashishini kuba zihlala zigubungela iindawo ezinkulu. Umgangatho wekhonkrithi okhazimlisiweyo ukwakulungele ukusetyenziswa ekuhlaleni kuba zininzi izinto ezinomtsalane onokukhetha kuzo, kude nomphezulu oqhelekileyo wekhonkrithi.
Unokuba nomgangatho wekhonkrithi okhazimlisiweyo kwizicelo zangaphakathi nangaphandle ngokusebenzisa amanqanaba ahlukeneyo okuqaqamba ukuze ulingane neemfuno zakho.
Ubude benkonzo yobomi bemigangatho ekhonkrithi ekhazimlisiweyo iyahluka kodwa kuyavunyelwana, kuxhomekeka kwizinto ezininzi ezinje ngomgangatho wesilayidi sakho sekhonkrithi, inkqubo yofakelo, isixa sezithuthi ezihamba ngeenyawo, kunye nolondolozo.
Uluhlu lwexesha elingakanani imigangatho yakho yekhonkrithi ecoliweyo enokuhlala iminyaka engama-20 ukuya kwiminyaka eli-100.
Umgangatho wekhonkrithi owomeleleyo ojongwa njengesisombululo somgangatho wokugcina izinto. NgokweZiko le-Eneref, ukutyibilika komgangatho wekhonkrithi kunamandla asezantsi kakhulu okushushubeza, akuniki ii-VOCs, kufuna amandla asezantsi ukugcina, kwaye kungatshi. Ngaphezulu koku, izinto eziphathekayo zinokusetyenziswa kwakhona kwaye ziphinde zenziwe kwakhona.
Ixesha elide lobomi
Ukuxhathisa ukugcwala kweenyawo eziphezulu
Ukuxhathisa kwimicimbi yokuhambisa ukufuma
Umgangatho ophathekayo wekhonkrithi ugqityiwe
Zimbini iintlobo eziphambili zekhonkrithi ekhazimlisiweyo:
Ukugaya nokutywina ikhonkrithi (G&S) umphezulu wekhonkrithi uphantsi kokugaywa okurhabaxa ukubonisa okuncinci okanye okuninzi njengelitye okanye umndilili ngokuxhomekeke kukhetho lwakho.
Ilungile ngaphakathi okanye kwigaraji yaphantsi kwaye ngokongeza umgubo ongatyibilikiyo ukuba uyafuna kwiindawo ezimanzi ezinokufikelela kuyo nayiphi na imfuneko yesiliphu.
Usile kunye ngophawu eziphathekayo na ixesha elide kakhulu, amanzi, kunye ibala-ukumelana, Noko ke, njengoko a sealant mlonyeni, kusenokufuneka kwetha okanye recoat qho kwiminyaka emi-3 ukuya ku-10 kuxhomekeke imveliso onqwenela ukwenza isicelo;
Xa kuthelekiswa nenkqubo ePholishwe ngoomatshini, ukugaya kunye nokuTywina kuyabiza kakhulu ngaphambili kodwa kuya kufuneka kuphindwe kugqitywe ngetopu egugileyo ngamathuba athile ke inkcitho eyongeziweyo.
Unokukhetha ezi ntlobo zilandelayo zokugaya kunye nokutywina ukubonakaliswa kwekhonkrithi:
Ukuboniswa -Ukugqitywa kwekhonkrithi okunqwenelekayo okulungele ikhonkrithi esandula ukuthululwa elandela ukucaciswa okungqongqo ukuthintela ukurhabaxa okanye ukwehla kumphezulu wekhonkrithi kwaye umndilili ongezantsi ungabonisa.
Umphezulu kufuneka ucolwe ngesixa esincinci ukwenzela ukuba kungabikho nto ibonisa ilitye. Umphezulu emva koko ugrunjelwe ukuzalisa imingxunya emincinci okanye imingxunya ekunika ukugqitywa okuthe tye kunye nokucokisekileyo. Emva koko, umphezulu ukhazimlisiwe kwinqanaba lokukhanya.
Ubuncinci beRandom -Yaziwa nangokuthi ityuwa kunye nepepile jonga isilika ekhonkrithi ifumana inkqubo yokusila kumphezulu we-1 ukuya kwi-3mm. Kunokubakho iindawo ezingenakudityaniswa kancinci kwaye kukho iindawo ezinokubhengeza amatye amaninzi kuxhomekeke kwindlela ethululelwa ngayo.
Ungafumana ubuncinci bomhlaba ongacwangciswanga ikakhulu kwiindawo ezijongeka njengemizi-mveliso ezinje ngegaraji kunye nomgangatho ongaphandle. Xa kuthelekiswa no-Nil kunye neendleko zokuvezwa ngokupheleleyo kunciphisa iindleko ezenza zibe zezona zibiza kakhulu kwezi ntlobo zontathu zomgangatho.
Ukubonakaliswa ngokupheleleyo Njengoko igama lisitsho, izinto ezihlanganisiweyo zivezwa ngokupheleleyo. Ukusuka kwabathathu olu hlobo lokuvezwa yeyona nto ibanzi kwaye iya kuthatha amaxesha ama-2 ukuya kwayi-3 ukusila ngaphezulu komgangatho ukubonisa ngokupheleleyo ilitye.
Ngokubanzi, umphezulu usila ezantsi nge-4 ukuya kwi-6mm okanye nangaphezulu kuxhomekeke kubulukhuni be-slab. Ukuvezwa kwelitye kukuhombisa ngakumbi kwaye kukugqibezela kwamakhaya, iivenkile zokutyela kunye neendawo zokubonisa.
Emva kwenkqubo yokusila, ezi zitywinwe kusetyenziswa ezahlukeneyo iintlobo zekhonkrithi ezigqityiweyo oko kukuthi i-matte, i-gloss-semi okanye i-gloss ephezulu.
Ukugqitywa kweMatte - Olu gqibelo lukhetho olugqibeleleyo xa ufuna isixa esifihlakeleyo sokubonisa kodwa ungafuni ukuba lube ngaphezulu kwegumbi okanye indawo. Inika imbonakalo yoshishino okanye i-rustic kwaye ithandwa kumakhaya, iivenkile zokutyela, iikhefi, iivenkile kunye nezinye iindawo eziqhelekileyo.
Ukukhanya kwesemi -Ukhetho oludumileyo njengoko inenqanaba elifanelekileyo lokukhanya kunye necala elibonakalayo ukubona ukukhanya okuhle okulula ukulondolozwa ngokuthelekiswa nokugqitywa okuphezulu. Ngokwesiqhelo, isebenzisa i-800-grit okanye idayimane ephezulu yokurhabaxa ukufezekisa isicwebezelisi.
Isikhanyiso esiphakamileyo -Ungayibona ngokulula indawo ephezulu yokuhombisa xa ubona umboniso wakho emgangathweni kwaye umphezulu ujongeka ngokungathi umanzi xa ujongwa kwii-engile ezithile. Ukugqitywa okuphezulu kunokuba lukhetho oluhle kwii-lobbies zehotele, kwiiofisi zolawulo, nakwamanye amagumbi asemthethweni.
Umphezulu omangalisayo ngokwesiqhelo uya kufuna i-diamond enee-3,000-grin resin-bond diamond okanye umgangatho unokufumana isitshisi esikhawulezayo esineephedi zokubuyisa. Iinkqubo ziyaphindwa de kufikelelwe kwisiphelo esiphakamileyo.
Emva koko umphezulu wawutywinwe ngetywina ngokuxhomekeke kwiimfuno kunye nobude bexesha lokuphila:
I-Acrylic kunye nePolyaspartic Coating.
Kwikhonkrithi eyenziwe ngomatshini (MPC) yikhonkrithi uqobo lwayo engakhanyisi ukutyabeka okungaphezulu.
Ukufezekisa ukujonga okucociweyo, kuyaqhubeka iinkqubo ezifanayo nokusila kunye nokutywina kodwa ngeli xesha umgangatho ugrunjwe kwaye uqhubeka neenkqubo ezahlukeneyo zokwenza uxinizelelo okanye ukuqina phambi kokuba uphuculwe amatyeli amaninzi ukufumana inani. Kukho amanqanaba aphezulu obugcisa kunye neenkqubo zetekhnoloji ezifunekayo.
Ikhonkrithi ePholiswe ngoomatshini yinkqubo ekhuthazwa ukuba isetyenziswe ngakumbi kumgangatho ongaphakathi wangaphakathi.
Njengokusila kunye nokutywina, ungakhetha uhlobo lwekhonkrithi olucekeceke ngomatshini olubandakanya i-nil, ubuncinci kunye nokuvezwa ngokupheleleyo. Oku kuyafana nakwinqanaba lokuqaqamba okt matte, semi-gloss kunye high-gloss.
Umgangatho wekhonkrithi namhlanje ubonelela ngaphezulu kokujonga grey okuqhelekileyo esihlala sikubona kwiipavumente. Imigangatho ekhonkrithi yala maxesha inganakho nakuphi na ukuyila kunye nokufaka imibala ehambelana nokukhetha uyilo kunye nohlahlo-lwabiwo mali ngenkqubo ebizwa ngokuba kukudyobha.
Imigangatho ekhonkrithiweyo egciniweyo ilungele ukusetyenziswa kwendawo yokuhlala kunye nentengiso kwaye inkqubo inokwenziwa kokubini kwikhonkrithi esandula ukufakwa kumgangatho wekhonkrithi okhoyo.
Umbala osisigxina. Kuba amabala ekhonkrithi afakwa nzulu kumphezulu wekhonkrithi, iba ngumbala osisigxina. Ngokungafaniyo nokusebenzisa ipeyinti okanye ukutyabeka imozulu kunye nezinye izinto zinokucima okanye zenze umbala ungaphezulu.
Inokulinganisa nawuphi na umbala okanye ujonge. Ukufezekisa nawuphi na umbala owukhethileyo ngekhonkrithi enebala epholileyo. Ukusuka kumacebo afihlakeleyo, imibala engqindilili, okanye naziphi na ezinye iindlela zokuyila onokucinga ngazo, ikhontraktha yobuchwephesha inokukunceda ufezekise inkangeleko yakho oyifunayo kwimigangatho yakho yesamente.
Ngaphandle kukhetho lombala, inkqubo yokwazisa umbala kumgangatho wakho wekhonkrithi iya kuba nefuthe kwinkangeleko kunye neendleko zomgangatho wakho wekhonkrithi ocolileyo. Oku kulandelayo zezi
Ukuzisa umbala kumgangatho opholileyo ayisiyonto nje yokwenza ukhetho lombala. Ifuna ukuqondwa kakuhle kweemveliso ezahlukileyo zombala ezikhoyo kunye nendlela ezichaphazela ngayo ukufakwa kwesamente. Kukho iimveliso ezine okanye iindlela zokubala umbala wekhonkrithi engwevu. Ngamnye unombala owahlukileyo wombala kunye nendlela yokwenza isicelo.
Shake-on Colour Hardeners
Ukungena kwamachiza amachiza
Indibaniselwano-kumgangatho omtsha wekhonkrithi
Ukudibanisa imibala ye-admixtures kuthathwa njengeyona ndlela ilula kunye nokusingqongileyo yokufaka umbala ofanayo kumgangatho wakho wekhonkrithi. Isetyenziswe kakuhle kwikhonkrithi esandula ukugqitywa ukufezekisa imibala efanayo ngaphandle kokwahluka.
Qaphela ukuba umbala wakho wesamente uya kuchaphazela umbala wakho wokugqibela. Umzekelo, isamente emhlophe iya kudala iithoni ezikhanyayo nezityebileyo ngelixa isamente engwevu izakuvelisa ithoni ethulweyo.
Indibaniselwano - Umgangatho oGutyungelweyo - Ukongeza imibala yokufaka imibala kumbala ophezulu ngexesha lenkqubo yokugqitywa kombane. Izihlanganisi zongezwa kwikhonkrithi ngaphezulu okanye kwisamente ukwenza umbala ohambelana. Ikwabizwa ngokuba yimbewu yesamente okanye umxube wombala.
Idayi - Amanzi asekwe- Isetyenziswe ngexesha lokucoca kunye nokukhetha okusingqongileyo nangona ivelisa umbala okhanyayo okanye othulileyo kunedayi esekwe kwisinyibilikisi.
Idayi-Isiseko esiSisiseko Ifakwe ngexesha lenkqubo yokupholisha kwaye ayisiyiyo imeko yendalo esingqongileyo kodwa ivelisa umbala odlamkileyo kunowasekwe emanzini.
Ukugcina iasidi - Isetyenziswe ngexesha lokucoca apho amanzi, ihydrochloric acid, kunye neasidi enyibilikayo isinyithi ixutywe kunye ukuvelisa umxube ophendulwa ngekhemikhali kunye nelikalika enamanzi ekhonkrithi. Oku ngokuthe ngcembe kubethelela umgangatho wekhonkrithi onceda iityuwa zentsimbi zingene kwi-slab elula. Ukubola kuyinxalenye esisigxina yomgangatho wekhonkrithi.
Impembelelo ebonakalayo yemigangatho ekhonkrithi emhlophe emhlophe ngokungathandabuzekiyo intle kwaye inombala ofanelekileyo, obu buchule bunokuhlala ixesha elide kakhulu.
Imigangatho ekhonkrithi emhlophe eqaqambileyo necocekileyo iyamangalisa nakweyiphi na indlela enokusetyenziswa ukusuka kumakhaya ukuya kumaziko orhwebo. Yiba negumbi elimhlophe elicocekileyo kwaye unokwenza ngokulula indawo yangasemva entle yomxholo omncinci okanye wale mihla.
Asinguye wonke umntu onokuba nesibindi ngokwaneleyo sokusa ukugqiba okumhlophe ngenxa yemicimbi yokugcinwa kwayo, kodwa ngomgangatho omhlophe wekhonkrithi omhlophe, kulula ukuwugcina ngenxa yomphezulu ocolekileyo.
Fumana ubuhle bemigangatho yeoksik ngaphandle kokuphula i-bank ngombala omnyama wekhonkrithi ene-asidi. Ingumgangatho omhle womgangatho oza kujongeka umhle eofisini, kwigumbi lokungenisa, okanye kuyo nayiphi na indawo yorhwebo.
Ukuba ufuna ukongeza imood kunye nobugcisa kuyo nayiphi na indawo yekhaya lakho umgangatho omnyama wekhonkrithi omnyama lukhetho olukhulu. Ukuphakama kwenqanaba lokuqaqamba komgangatho wakho omnyama wekhonkrithi ukuhla ngakumbi kunye nokuqaqamba kombala.
Ngomgangatho wekhonkrithi, unokongeza nawuphi na umbala onokucinga ngawo. Ukuphumeza ngcono umbala, owufunayo kwimigangatho yakho, khetha inkqubo yedayi endaweni yoko, njengoko ukubala kunokukunika umbala ongalindelekanga ngenxa yempendulo ecothayo yemichiza.
Umgangatho wekhonkrithi opolishwe ngemibala lukhetho oludlamkileyo noludlalayo onokuthi ulongeze kwipatiyo yakho, kwigumbi labantwana, okanye nakweyiphi na indawo yekhaya lakho apho ufuna khona umgangatho wekhonkrithi okhangeleke emehlweni. Bona Okuninzi Izimvo zekhonkrithi ezikhazimlisiweyo Apha.
Umbala osisityebi omdaka womthi we-walnut osetyenziswe kwikhonkrithi ecoliweyo wenza ubushushu obufudumeleyo nobonwabisayo kwindawo engenazo iimfuno zolondolozo lomgangatho weplanga. Zikulungele nekhitshi lakho kunye neendawo zokuhlala ezinobume bazo obumemayo.
Ukuba uceba ukuba nesimbo sendabuko ngakumbi ngaphakathi kwekhaya lakho, umgangatho wekhonkrithi omdaka walnut lukhetho olufanelekileyo olungabizi kakhulu kwaye olukhawulezayo ukufakwa.
Unokukhetha kumgangatho wekhonkrithi odayiweyo okanye onamabala kodwa imigangatho ekhonkrithi edayiweyo ngoku lukhetho oludumileyo ngenxa yokufakwa kwawo ngokukhawuleza.
Olunye ukhetho luphakathi kwedayi esekwe emanzini okanye idayi esekwe kwisinyibilikisi. Idayi esekwe emanzini iya kuvelisa ukubonakala kwebala ethambileyo ngelixa iimveliso ezinyibilikayo zibonelela ngemibala eqaqambileyo.
Iindleko zokufaka imigangatho ekhonkrithi ebengezelelweyo yahluka ngokubanzi eya kuxhomekeka ikakhulu kwindawo yeprojekthi, amanqanaba okusila, inqanaba lesilayidi, imibala, kunye nokuntsokotha koyilo olongeziweyo. Ngokomndilili, lindela ukuhlawula ukusuka kwi- $ 3 ukuya kwi- $ 12 ngonyawo wesikwere.
Imigangatho yokuhlala inokuba phezulu ngeendleko ngenxa yesidingo sezixhobo ezincinci kunye nezinye iimeko ezizodwa zoyilo.
Eyona ndlela yokuqikelela iindleko zeprojekthi yakho kumgangatho wekhonkrithi opholileyo kukufumana isicatshulwa kwikontraki yakho. Nangona kukho amaxabiso aphakathi ukukunika umbono ngokubanzi wokuba uza kuhlawula malini kumgangatho wakho wekhonkrithi.
I-alexis bledel kunye ne-vincent kartheiser
Ukhetho lwezoqoqosho Ukusuka kwi- $ 3 ukuya kwi- $ 5 ngonyawo wesikwere
Ukunciphisa ukulungiswa komhlaba
Umhlaba ophantsi kwaye ukhazimlisiwe kukukhanya okuphakathi
Uluhlu olulodwa lombala webala.
Uluhlu oluphakathi lweedola ezi-5 ukuya kwezi-8 ngeenyawo zenyawo nganye
Iinketho ezongezelelweyo zokwenza ngokwezifiso
2 imibala yebala
Ukulinganisa iipatheni ezilula okanye izinto zoyilo
Ukulungiselela okuphezulu komhlaba
Isiphelo esisezantsi esincinci esincinci se-8.00 ngenyawo lesikwere
Ukulungiselela komhlaba kunye nokugaya
Iinkcukacha zokubhala ngesandla
Amabala amibala kunye nemidlalo ehambelana nombala
Uyilo oluntsonkothileyo, istensile, okanye iipateni
Ukulungiswa okubanzi komgangatho okhoyo wekhonkrithi ophakathi kwe- $ 1 ukuya kwi- $ 2 ngeenyawo zenyawo nganye yokugaya nokutywina. Ukongezwa kwe- $ 2 ukuya kwi-3 yeedola kwisikwere sokuphinda ubuye.
Kukho uluhlu olwahlukeneyo kwiindleko ezongeziweyo zestampu, ukugcoba, kunye nokutywina umsebenzi kuxhomekeke kuyilo, ubungakanani, kunye nezinye izinto zokuhombisa ezinokuqala kwi- $ 1 ukuya kwi-10 yeedola kwenyawo nganye.
Ukupholisha umgangatho wekhonkrithi omdala kungafuna iinkqubo ezongeziweyo, ngokungafaniyo nekhonkrithi entsha. Amalungiselelo ongezelelweyo anokubandakanya ukususa amabala, ukugcwalisa iminqwazi, nokucoca umphezulu kuyo nayiphi na into engcolisayo efunekayo.
Cela ikhontraktha yakho ukuba ivavanye umgangatho wakho wekhonkrithi okhoyo kwaye wazi ukuba kungcono ukuwutshintsha kunye neenketho zangaphandle zomgangatho okanye uqhubeke ngomgangatho wekhonkrithi.
Ikhonkrithi ekhazimlisiweyo ngombala ocacileyo inokubiza malunga ne- $ 1.75 ukuya kwi-4.00 yeedola kwaye ikhonkrithi edayiweyo inokubiza i- $ 2.50 ukuya kwi- $ 8.00.
Kukho uluhlu olubanzi lweendleko zomgangatho xa kufikwa kumgangatho wekhonkrithi opolishiwe oxhomekeke kwizinto ezininzi ezinje ngobungakanani kunye nendawo yeprojekthi yakho. Amaxabiso axhomekeke kumanqanaba okusila kunye nokuguda komphezulu.
Ikhonkrithi esisiseko epholileyo ngaphandle kokwenza uyilo olunzima ihlala inexabiso eliphantsi kunokufaka ezinye iindlela zokhetho kunye neendleko zokugcina eziphantsi minyaka le ugcina ixesha elide. Akukho mfuneko yokuba bathathe indawo yezinye ukusuka kwiminyaka esi-8 ukuya kwengama-20.
Kwaye ukuba uvavanya phakathi komphezulu womgangatho osekwe kwiindleko, ngokucacileyo ikhonkrithi yeyona ndlela inexabiso eliphantsi, kodwa ekugqibeleni ukhetho lwakho kunye neemfuno ziya kuba nefuthe kwiindleko.
Ngoku siza kugubungela ezinye zezona zicelo zibalaseleyo zeentlobo ezahlukeneyo zemigangatho ekhonkrithi ekhazimlisiweyo kulo lonke ikhaya. Ezi zezinye zezona zimvo zixhaphakileyo zoyilo zisetyenziselwa imigangatho epholisiweyo kwaye azigubungeli zonke iinketho ezikhoyo umntu anokuzisebenzisa.
Uhlobo olusetyenzisiweyo kwigumbi lokuhlala lekhonkrithi eliphuculiweyo- Ikhonkrithi yeGrey ekhazimlisiweyo
Kwindawo ephambili ekhayeni lakho, igumbi lokuhlala kufuneka libe yindawo eyamkelekileyo nenomtsalane yoyilo-phambili kodwa olusebenzayo.
Ungafezekisa ukujonga okwangoku ngokujongwa kweklasikhi ekhazimlisiweyo, imbonakalo engwevu kunye neyamashishini yale ndawo yophahla inika indlela yokongeza kwizinto zokwakha kunye nokuhombisa eziya kuhamba kakuhle nomgangatho wakho ongathathi hlangothi.
Yongeza imibala, iithowuni zombala, kunye nezinye izinto zoyilo ukuze uchaze isitayile sakho yoyilo.
Uhlobo olusetyenzisiweyo kumgangatho wekhonkrithi okhazimlisiweyo- iAcidi egciniweyo
Ngomphezulu ongapheliyo, ikhitshi linokuxhamla kakhulu kumgangatho wekhonkrithi. Ayonakalisi lula kwaye umphezulu ogudileyo uthetha ukuba kulula ukusula kunye nokugcina.
Nangona unokukhetha ukubeka ibala le-asidi kumgangatho wakho wekhonkrithi ukunika umgangatho ukubonakala kweemoto ukunceda ukufihla ukungcola kwigumbi lezithuthi eziphezulu. Isiphumo kukujongeka okunomdla okwahlula-ntathu okuhlala ixesha elide.
Izithembiso zesilivere ezigqwesileyo ziya kumenzela amakhonkco
Uhlobo olusetyenzisiweyo kumgangatho wokuhlambela wekhonkrithi- Ukujonga kweTerrazzo
Kukho inani eligqibeleleyo lokugqitywa kwekhonkrithi elinokuthi lenze ukuba igumbi lokuhlambela libukeke limangalisa njengomgangatho wekhonkrithi odibeneyo ukulinganisa ukubonakala okufana nemarble.
Unokukhetha ikhonkrithi ecacileyo yendlela encinci yokujonga indawo ecocekileyo nebukhali.
Ukuba ufuna ukongeza ucoceko kwigumbi lakho lokuhlambela lale mihla ukubukeka kweterrazzo lukhetho olunomtsalane njengoko izihlanganisi eziveziweyo zongeza umdla obonakalayo kwigumbi lakho lokuhlambela. Inkangeleko enamacwecwe inokwandisa isinki yakho kunye nekhawuntara ukuze uyilo oludibeneyo.
Ukuba ukhathazekile ngokutyibilika kumgangatho wakho opolishiwe, yongeza i-anti-slip conditioner okanye ungeze isanti eyongezelelweyo ngexesha lokugqiba ukongeza ubume.
Uhlobo olusetyenzisiweyo kumgangatho wegaraji-Ikhonkrithi emiselweyo
Ikhonkrithi ethembekileyo iyacetyiswa kwiindawo zangaphandle ezinjengeendlela zokuhamba, iindlela zeenyawo, iivaranda, amachibi, kunye nezinye iindawo eziphantsi okanye ezithe tyaba. Nangona uqaphela ukuba iza kuphela kwisiphelo se-matte kodwa umgangatho wekhonkrithi opholileyo uya kuba nenqanaba lesheen xa ugqityiwe ukuvalwa.
Xa kuthelekiswa nokusila kunye nokutywina isitywina sifunxiwe kwikhonkrithi ukuze ingahlali kumgangatho womphezulu. Ukutywina okutywinayo kuyenza inxibe ngakumbi ukuyenza ibe yindawo efanelekileyo yezinto kunye nemisebenzi yomgangatho ongaphandle.
Nangona kunjalo ukugaya kunye nokutywina kunokuba yinto elungileyo ukuba ufuna inqanaba eliphezulu le-sheen kwindawo yakho yangaphandle. Kukongezwa i-grit engatyibilikiyo kumphezulu ukuyinceda ukuba ingatyibiliki. Izongezo ziyongezwa ukongeza kumgangatho we-UV ukuthintela umphezulu ukuba ubonakale ngokuhamba kwexesha.
Uhlobo olusetyenzisiweyo kumgangatho ongaphantsi ophuculiweyo-Ukugaya kunye nokuTywina
Uncedo lomgangatho wekhonkrithi ocoliweyo kumgangatho ongaphantsi kukuba unokwandisa ukukhanya komgangatho ukuya kuthi ga kwi-100%, oku kwenza ukuba igumbi likhangeleke ngakumbi. Ukuba uthintele ukukhanya kwelanga kwigumbi elingaphantsi eliphathekayo lekhonkrithi liya kubonisa kwaye lisasaze ukukhanya okukhoyo.
Esinye isibonelelo esihle esenziwe kumgangatho wekhonkrithi opholileyo kukuba awugcini uthuli kwaye unokucinywa ngokulula xa kufuneka njalo. Oku kuthetha ukuba ufumana umgangatho ophucukileyo womoya ongaphakathi xa uthelekisa lowo womgangatho okhuni okanye iithayile apho uthuli kunye nenkunkuma zinokugcwalisa ngokulula izithuba kunye nemingxunya phakathi.
Ngelixa imigangatho ekhonkxiweyo kulula ukuyicoca kunye nokuyigcina kukho iiarhente zokucoca ukunqanda ukuthintela ukonakalisa okanye ukwenza buthathaka isitywina esetyenzisiweyo. Isitshixo kukugcina indlela yakho yokucoca ilula kwaye iqhelekile.
Inkqubo yesiqhelo ayifuni ukutywinwa okanye ukuthanjiswa kunye nemophu elula kunye nebhakethi lamanzi liya kuyenza.
Nangona kunjalo, oku akukuthinteli ekusebenziseni ezinye iikhemikhali, kodwa kuya kufuneka uqaphele ukuba zeziphi na iikhemikhali ozisebenzisayo ukunqanda ukudambisa imibala okanye ukonakalisa iipateni.
Gwema iiasidi okanye nayiphi na imichiza enehydroxide kunye neesulphate ezifana nezicoci, ezi ziquka iammonia okanye iblitshi. Iikhemikhali ezinceda ukwahlula amasuntswana phantsi kukhetho olufanelekileyo, nangona kunjalo, hlala kude neebrashi ezinzima kwaye unokubangela umphezulu ukuba ube buthuntu okanye ushiye ukumakisha okungafunekiyo.
Sukusebenzisa i-ammonia, iblitshi, okanye nayiphi na into ene-asidi eninzi kwimigangatho egudisiweyo okanye enesitampu. Abanye abacoca kakuhle baquka isepha yeCastile, isepha yokuhlamba isitya, ukucoca amatye kunye nokucoca umgangatho ophantsi. Hlanganisa isisombululo, fakela phantsi kunye nemophu emanzi uze uhlambe nge-mop udibene emanzini acocekileyo.
Ukucoca uMgangatho oPhakathi
Umqukumbelo ophathekayo weKhonkrithi
Ikhonkrithi ayisenguye iswekile engwevu engwevu phantsi kweenyawo zethu. Ngokuqhubela phambili kuyilo lwangaphakathi, ikhemistri, ubunjineli, kunye namanye amashishini ahambelana noko, ngoku siyakwazi ukuguqula izinto ezisisiseko zibe yinto entle enokuthi ibe negalelo ekubonakaleni kwendawo yangaphakathi.
I-Stencils, iipateni zokuhombisa, uluhlu olubanzi lwemibala onokukhetha kuyo inokujika ikhonkrithi ibe yingubo enokuthi ihlale ixesha lokuphila, inikwe inkathalo efanelekileyo.
Ngolwazi oluthe kratya ndwendwela iphepha lethu malunga iipateni zokwenziwa kweplanga .
Izimbo zokunxiba zomtshato zemilo yomzimba
mingaphi imitshato ayenzileyo u-nick jonas
isipho sekrisimesi sendoda eyindoda
Indawo yokulala iingcamango zombhoxo